Muuri News Network » XOG LA OGAADAY: Dagaalka Shabaab & Daacish Ee Soomaaliya Ka Socda Waxay Faa’iido U Tahay Qole Kale Oo Ajaanib Ah [AKHRISO
XOG LA OGAADAY: Dagaalka Shabaab & Daacish Ee Soomaaliya Ka Socda Waxay Faa’iido U Tahay Qole Kale Oo Ajaanib Ah [AKHRISO
Dagaalka iyo loolanka ka dhexeeyo Xarakada Al Shabaab iyo kooxda la magac baxday Dowladda Islaamka ee Daacish ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu isku baddalay hanjabaad ay isku jeedinayeen labada kooxood oo ku aadan ka arriminta deeganno gudaha Soomaaliya, kaddib markii dhawaan ururka IS ay dagaal ku qaadeen dagaallamayaal ka tirsan Al Shabaab.
Dhawaan hoggaanka sare ee Al Shabaab ayaa ku dhawaaqay dagaalka ka dhan ururka IS ee ka dagaallama Soomaaliya isla markaasna ugu yeeray ‘cudur dilaa ah’ oo ah in la dabar gooyo.
Al Shabaab waxay sheegtay in kooxda IS ay ka shaqeynayaan sidii tafaraaruq looga dhex abuuri lahaa gudaha Al-Shabaab iyo sidoo kale inay caqabad ku noqdeen ”Jihaadka”.
IS waxay ugu baaqeen ururada kale ee ”jihaad-doonka” ah inay kusoo biiraan kooxdooda, isla markaasna ciddii kasoo horjeesata mabaadii’dooda ay u aqoonsan yihiin cadow.
20-kii bishan December, wargeyska toddobaadlaha ah ee IS ee Al Naba ayaa soo qoray maqaal ku saabsan dagaal iyaga Shabaab ku dhexmaray Soomaaliya, waxaa uu ciwaan uga dhigay ‘Iska caabintii ugu horreysay, waxaa soo socda ayaa ka daran’.
Cali Dheree ayaa sidoo akle sheegay: ”Al Shabaab waxay in muddo ah indhahaka daboolaneysay dagaallamayaasha IS ee ku sugan Soomaaliya, si ay isaga ilaaliso inuu dhiig daato”.
Bishii Luulyo ee sannadkan waxay Daacishta Soomaaliya isugu yeereen magaca ‘Wilaayah’ inay yihiin xubin rasmi ah oo ka tirsan kooxda isugu magacaawday Khilaafada Islaamka.